भारतीय सेनाको कर्नेलमा पदोन्नती भएपछि भव्य पार्टी, साथीको श्रीमतीलाई पार्टीमै ब’लात्कार ! – साँचो खबर
भारतीय सेनाको कर्नेलमा पदोन्नती भएपछि भव्य पार्टी, साथीको श्रीमतीलाई पार्टीमै ब’लात्कार !
काठमाडौं, १ पुस । भारतको कानपुरमा एक सैनिक अधिकारीले साथीको श्रीमतीलाई ब’लात्कार गरेका छन् । ती ब’लात्कार आरोप लगेका सैनिक भर्खरै कर्नेलमा पदोन्ती भएका हुन् । घटना आइतबारको हो ।
उनले सोही पदाेन्नती भएको अवसरमै आफ्ना साथी र उनको श्रीमतीलाई पनि बोलाएर पार्टी गरेका थिए । र, पार्टीमा साथीलाई बेहोस हुने औषधि खुवाएर उनकी श्रीमतीलाइ ब’लात्कार गरेको भारतीय समाचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
ती कर्नेलले पार्टीमा साथीलाइ दिएको खाने कुरामा नसालु औषधि मिसाएर दिएको खुलेको छ । त्यसपछि उनले साथीकाे श्रीमतीलाइ ब’लात्कार गरेका थिए । प्रतिकार गर्दा ती कर्नेलले महिलालाई कु’टपीट समेत गरेको बताइएको छ ।
ती साथीकी श्रीमती रसियन भएको बताइएको छ । पीडित श्रीमान श्रीमतीले उजुरी दिएपछि ती बला’त्कार गन कर्नेललाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरि हिरासदमा लिएको बताइएको छ । घटनाको सम्बन्धमा अनूसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
Previous: स्थायी कमिटी बैठकअघि ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
Next: भाइरल बेहुली श्रीमानसंगै पहिलो पटक मिडियामा, उनका श्रीमान झनै रमाइला (भिडियो सहित)